टिचिङ अस्पतालका ‘इन्जिनियर’ डाक्टर – Health Post Nepal
२०७५ कार्तिक १२ गते ११:०६
चितवनमा कोरोना थामेका डाक्टर भोजराज
सहकार्यले सफल डाक्टर दम्पती
डिल्लीबजारस्थित लोहनी परिवारको वातावरण संगीत, साहित्य र कलाले पूर्ण थियो । पूर्ण साहित्यिक वातावरणको त्यो घर चर्चित हास्यव्यंग्य कवि लक्ष्मण लोहनीको थियो । रेडियो नेपालका डेपुटी डाइरेक्टरसम्म बनेका लक्ष्मणको संगत शिवशंकर, नतिकाजीजस्ता धुरन्धर प्रतिभासँग थियो । उक्त परिवारमा २०१९ भदौ ऋषिपञ्चमीको पवित्र दिन आमा शारदा लोहनीको गर्भबाट जन्मिएका थिए, चर्चित प्लास्टिक सर्जन डा. ईश्वर लोहनी ।
नेपालकै पहिलो एमसिएच (मास्टर इन चिरुर्जी) गरेका प्लास्टिक सर्जन डा. ईश्वर लोहनी त्यही माहोलमा हुर्के । कला, साहित्य र संगीतमय माहोलले भरिपूर्ण थियो परिवार । घरमा पढ्नुपर्छ भन्ने सोच नहुने कुरै भएन । घरैमा गुरु बोलाएर ईश्वरलाई कखरा चिन्ने अवसर मिल्यो ।
बाल्यकालमै उनी पनि संगीततर्फ आकर्षित भए । ६ कक्षा पढ्दा उनको हात तवलामा अभ्यस्त भइसकेको थियो । गुरु थिए राधाकृष्ण । गुरु घरैमा आएर तवला सिकाउँथे । ०३० मा लोहनी परिवार डिल्लीबजारबाट कमलादी स¥यो, त्यसपछि केही समय तवला छुट्यो । मन बसिसकेकाले विकल्पका रूपमा अर्का नामुद तवलावादक प्रो. कालीप्रसाद शर्माबाट हप्तामा दुईपटक तवला सिक्थे उनी ।
नेपाली समाजमा एउटा व्यक्ति धेरै सन्दर्भ र प्रसंगमा जोडिनुपर्छ । ‘चाडपर्व, सामाजिक कार्य, भेटघाट, सरकारी सिस्टममा जाडो, गर्मी बिदा, वर्षभरि जोड्दा त पढ्ने समय आधा पनि नहुने,’ उनले आफैँलाई प्रश्न गरे, ‘घरै बसेर यी सबै सामाजिक बन्धन र सम्बन्ध छोडेर ढोका थुनेर पढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ त ? रहन्न ।’
त्यतिवेला डा. प्रदीप वैद्य मद्रास मेडिकल कलेजमा पढ्दै थिए । ईश्वर दुई दिन मद्रासमा गएर उनीसँगै बसे । मदुराईमा पढ्दै थिए– डा. यादवदेव भट्ट । डा. भट्ट उनका अस्कलका पनि सहपाठी र पछिल्लो समय नातासमेत जोडिएका थिए ।
डा. भट्टले मदुराईमा पढ्न थालेको एक वर्ष भइसकेको थियो । डा. भट्ट उनलाई एयरपोर्टसम्म लिन आए । सुरुमा जाँदा भाषाको समस्या थियो । त्यहाँको स्थानीय तामिल भाषा नजानी बिरामीसँग कुरा गर्न पनि समस्या हुन्थ्यो । नेपाली–नेपाली बोल्नेमान्छे एउटै कोठामा बसेर त स्थानीय भाषा सिकिन्न । यही निष्कर्षसहित डा. भट्ट र ईश्वर होस्टेलमा मद्रासीभाषीसँग छुट्टाछुट्टै बसे । मद्रासीमा पनि उनीहरूबाट अंग्रेजी सिक्ने आशा थियो । माध्यम भाषा अग्रेजी बनाएर केही समयमै उनले मद्रासी सिकिहाले । मद्रासी बोल्न मात्रै होइन, लेख्न–पढ्न पनि निपूण छन् उनी ।
सन् १९९१ अर्थात् पढेर फर्किएकै वर्ष त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै हाउस अफिसरको रूपमा काम सुरु गरे । डा. महेश खकुरेल ईश्वरका मामा हुन् । डा. खकुरेलले नै उनलाई डा. अञ्जनीकुमार शर्माको युनिटमा पोस्टिङ माग्न सुझाए । ‘उहाँकोमा राम्ररी सिक्न पाइन्छ,’ महेश भन्थे । डा. केपी सिंह पनि त्यही युनिटमा थिए । सुरुदेखि नै ईश्वरको रुचि सर्जरीमा थियो । एमबिबिएसमा पनि सर्जरीमा डिस्टिंक्सन आएको थियो । ईश्वरका ठूलोबुबा रत्नप्रसाद लोहनी (एफआरसिएस) आर्मी अस्पतालमा सर्जनका रूपमा काम गर्थे । रत्नप्रसाद पनि चक्कु समातेको देखेरै छोरालाई ‘राम्रो शल्यचिकित्सक बन्छस्’ भनेर हौसाउँथे । हाउस अफिसर हुँदा नै उनले अञ्जनीकुमार शर्मासँग धेरै सिक्न पाए । ईश्वर सफल शल्यचिकित्सक बन्ने जग त्यहीँ बस्यो ।
सर्जरीमा मन बसेपछि पोस्टग्य्राजुएसन सर्जरीमा नै गर्नु थियो । विकल्पको खोजी सुरु भइ नै हाल्यो । पिजिआई चन्डीगढका लागि प्रयास गर्ने निधो भयो । १९९२ को जनवरी सेसनकै विदेशीका लागि सुरक्षित सिटमा उनले फर्म भरे । डा. अञ्जनीकुमार शर्माकै सिफारिस थियो । पिजिआईमा विदेशी विद्यार्थी छान्ने प्राध्यापक थिए, डा. जेडी विग । उनी अञ्जनीकुमार शर्माकै एफआरसिएसका सहपाठी थिए । अञ्जनीको सिफारिस देखेपछि ईश्वर आँखा चिम्लिएर छानिए ।
त्यतिवेला पञ्जावमा पृथक्तावादी आन्दोलन चल्दै थियो । परिवारमा ईश्वरलाई चण्डीगढ पठाउने–नपठाउने विषयमा छलफल भयो । आन्दोलन चलिरहँदा परिवारको मन डराउनु स्वाभाविक थियो । डा. विमल सिन्हा, डा. विकेमान सिंह पनि पिजिआईमै पढेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै कार्यरत थिए । अगुवा र प्राध्यापकहरूले अवसर नगुमाउन सुझाब दिएपछि ईश्वरले परिवारलाई जसोतसो मनाए । राम्रो सर्जन बन्ने सपना साकार पार्न उनी पिजिआई लागे ।
८ जनवरी १९९२ मा चण्डीगढ पुगे । चण्डीगढमा पनि उनको एमबिबिएसजस्तै शुल्क तिर्नुपर्ने थियो, तर ट्युसन फी वर्षको ६ सय मात्र तिरे पुग्थ्यो । चण्डीगढमा उनी पढेकै समयमा ६ जना नेपाली सोही कलेजमा पढ्दै थिए, डा. आस्मा राणा, डा. किरण रेग्मी, डा. यादवदेव भट्टलगायत । पिजिआईको पोस्टग्य्राजुएसन, कडा ड्युटी ।
काम सुरु गरेपछि समय बित्न कति नै बेर लाग्छ र ! सन् १९९४ अप्रिलमा पिजी पनि फाइनल हुने क्रममै थियो । विवाहको कुरा चल्यो । मद्रासमै एमबिबिएस गरिरहेकी आपूmभन्दा दुई वर्ष जुनियर डा. बेनु वाग्लेसँग भेट भएको थियो । भेटघाट साधारण भए पनि दुई परिवारको आपसी सहमतिमा बिहेको कुरो पक्का भयो । २० अप्रिल १९९४ रामनवमीको पावन दिन विवाह सम्पन्न भयो ।
उनी पिजी सक्ने सँघारमा थिए । पिजी पढुन्जेल त कलेजमै होस्टेल थियो । पकाउने ठाउँ पनि हुन्थ्यो । अब उनले पिजी सक्नेबित्तिकै फर्किन पाएनन् । डा. बेनु रेडियोलोजीमा पिजी गर्दै थिइन्, साथै गर्भवती पनि । १९९४ डिसेम्बरमा पिजी सकाए र कामको खोजीमा लागे ।
बच्चाको केयर गर्न उनले होस्टेल छोड्नुप-यो । बाहिर फ्ल्याट लिएर बस्न थाले । १९९७ जुलाईमा उनको एमसिएच सकियो, डिसेम्बरमा बेनुको पिजी । सुत्केरी भएर एक महिना ड्युटी गर्न नपाएका कारण १९९८ को जनवरीसम्म पोस्टिङपछि बल्ल डा. बेनुको पनि पढाइ पूरा भयो । १९९८ फेब्रुअरीमा दुवै ज्ञान, सीप र आत्मविश्वास लिएर नेपाल फर्किए ।
क्लिनिकलतर्फ मात्रै होइन, अस्पतालको भौतिक र प्रशासनिक यात्रामा पनि डा. ईश्वरबाट त्रिवि शिक्षण अस्पतालले बलियो भरोसा पाएको छ । उनी फुर्सद हुनासाथ अस्पतालका वार्ड, कोठा, युनिट घुम्छन् । बत्ती बिग्रिएको छ कि, उपकरण चल्दैन कि, कुनै इलेक्ट्रोनिक मर्मतको काममा उनी सधैँ चाखपूर्वक संलग्न हुन्छन् ।
नेपाल फकिँदा डा. लोहनी पहिलो एमसिएच प्लास्टिक सर्जन थिए । फर्किएपछि उनले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा शिक्षण सहायक भएर काम गरे । एमसिएच सर्जरी गरेको मान्छे, एपेन्डिसाइटिसदेखि सबै जनरल सर्जरी गर्नुपथ्र्यो । त्यतिवेला सीपको सही उपयोग भएन भन्ने लागे पनि उनले धैर्य छाडेनन् ।
सीप त छँदै थियो । दुर्लभ दुर्घटनाका केसमा उनले जटिल शल्यक्रियामा सफलता देखाउँदै गए । बालुवाखानीसम्बन्धी झगडामा हात्तीगौँडाका राजकुमारको हात छिन्यो । ईश्वरले छिनेको हात जोडर पहिलाकै अवस्थामा फर्काइदिए । क्रमशः शिक्षण अस्पतालभित्र बेडसोर (खाटेघाउ) रिकन्स्ट्रक्टिभ र कस्मेटिकखालका सर्जरीहरू सुरु भए । समकक्षी डा. शंकरमान राईले पनि केही समय सँगै काम गरे, तर उनी छोटो समयमै राजीनामा दिएर हिँडे । डा. वसन्त माथेमाले पनि केही समय साथ दिए ।
त्यसपछि उनको विभागमा जनशक्ति थपिँदै गयो । डा. जयनमान श्रेष्ठ सिंगापुरबाट पढेर फर्के र साथ दिन थाले । अहिले उनीबाटै दीक्षित प्लास्टिक सर्जनको संख्या पनि ५ पुगिसक्यो । डा. संगम रायमाझी आइओएममै फ्याकल्टी बनिसके । युनिट फैलिएर धेरै काम देखाउन सक्ने भइसक्यो । हाल आएर छुट्टै विभाग भएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।
२००३ मा स्कटिस फाउन्डेसन फोर सर्जरीको प्रायोजनमा सूक्ष्म शल्यक्रिया (माइक्रोसर्जरी)को ६ हप्ताको फेलोसिप गरेर आएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको प्लास्टिक सर्जरी युनिट अझै एड्भान्स भयो । अहिले पनि रगतको नसा, छोएको थाहा पाउने नसा जोडेर हुने माइक्रोस्कोपिक सर्जरी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नियमित रूपमा हुने गरेको छ ।
अहिले प्लास्टिक सर्जरीका मेजर शल्यक्रिया मात्रै वर्षमा ४–५ सय हुन्छ । माइनर त हिसाबै छैन । थुप्रै विशिष्ट सेवा यहीँ मात्रै पाइन्छन् । यहाँ घाँटीबाट जाने नसामा (ब्रेकियल प्लेक्सस) आउने अवरोधका कारण हात नचल्ने समस्याको शल्यक्रिया हुन्छ । जन्मँदै हात घुमेका बच्चाको उपचार पनि शिक्षण अस्पतालमा हुन्छ । कुल प्लास्टिक सर्जरीको ५ प्रतिशत कस्मेटिक सर्जरी पनि हुन्छ, जसमा परेला मिलाउने, अनुहार तन्काउने, महिलाको स्तनको शल्यक्रिया तथा जन्मजात कान नभएकाको उपचार पनि हुन्छ । जन्मजात कान नभएकामा करङको कुरकुरे हड्डीबाट कान बनाएर कानकै मुनि फोल्ड गरेर ६ महिनापछि कान विकास गरेर फिट गरिन्छ । पुरुषको स्तन बढ्ने समस्या गाइनेकोमास्टियाको शल्यक्रिया पनि आजकाल ठूलो संख्यामा हुन्छ ।
क्लिनिकलतर्फ मात्रै होइन, अस्पतालको भौतिक र प्रशासनिक यात्रामा पनि डा. ईश्वरबाट त्रिवि शिक्षण अस्पतालले बलियो भरोसा पाएको छ । उनी फुर्सद हुनासाथ अस्पतालका वार्ड, कोठा, युनिट घुम्छन् । बत्ती बिग्रिएको छ कि, उपकरण चल्दैन कि, कुनै इलेक्ट्रोनिक मर्मतको काममा उनी सधैँ चाखपूर्वक संलग्न हुन्छन् । पहिलो चरणमा उनी सकेसम्म आफैँ मर्मत गर्न कस्सिन्छन् । यस अर्थमा उनी अस्पतालमा ‘इन्जिनियर’ कहलिएका छन् । उनी कुनै कुराको सोच, योजना बनाउन पनि उत्तिकै अब्बल छन् । अस्पतालका सानादेखि ठूला काममा उनी यो मेरो क्षेत्र र जिम्मेवारीको होइन भनेर पन्छिन्नन् । जे जानेका छन्, गर्छन्, आफ्नै घरजसरी नै । प्राविधिक रूपमा अस्पतालका कुनै पनि शाखामा समस्या आउँदा अधिकांशले सुरुमा उनलाई सुनाउँछन्, मानौँ कि उनी दक्ष प्राविधिक हुन्, अस्पतालका इन्जिनियर । ईश्वर सधैँ नै घरदेखि अस्पतालसम्मका यस्ता सानातिना बिग्रे–भत्केका कुरा आफैँ बनाउन कस्सिन्छन् ।
५ सयभन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कानुनतः नाताप्रमाणित गर्ने प्रमाणीकरण समितिका संयोजक पनि डा. ईश्वर नै छन् । नेपालमा कागजपत्र त जे पनि बनाइन्छ । त्यसको आधिकारिकता प्रमाणीकरणदेखि आफन्त हो कि होइन छुट्याउन धेरै नै कठिन हुन्छ । त्यसमा पनि उनी आफैँ लागिपर्छन् ।
‘म ठूलो पोखरी (अमेरिका)को सानो माछा भएर भन्दा सानो पोखरी (नेपाल)को ठूलो माछा भएर बस्छु ।’ अमेरिकामा बसेका भए उनी हजारौँ प्लास्टिक सर्जनका बीच हराएका हुन्थे होलान् । नेपालमा उनको उपस्थितिले धेरै फरक पारेको छ, गहन अर्थ राखेको छ ।
बहुप्रतीक्षित कलेजो प्रत्यारोपण कमिटीका संयोजक पनि उनै हुन् । अस्पताल अनुगमन समितिको संयोजन पनि ईश्वरले नै गर्छन् । अस्पतालका तर्फबाट कुनै अवधारणा बनाउनुप-यो, प्रस्ताव लेख्नुप-यो, चिठ्ठीपत्र तयार गर्नुप-यो, सबैले ईश्वरलाई नै सम्झिन्छन् । हालै स्वीकृत भएको जाइकाको ९० करोडको परियोजनाको प्रस्ताव पनि उनैले लेखेका हुन् ।
श्रीमती डा. बेनु शिक्षण अस्पतालमै रेडियोलोजी विभाग प्रमुख छिन् । छोरा सुमुख र छोरी संज्ञा पढ्दै छन् । एक बहिनी आरती लोहनी न्यौपाने अमेरिकाको भेरियन नामक कम्पनीमा सफ्टवेर इन्जिनियर छिन् । भाइ जगदीश लोहनी नेपालमै विगत ४० वर्षदेखि सामाजिक संस्था ‘युथ भिजन’मार्पmत लागुपदार्थ प्रयोगकर्ताको उपचारमा संलग्न छन् । ईश्वर पनि यस संस्थाको सदस्यको नाताले लागुपदार्थ प्रयोगकर्ताको मेडिकल आवश्यकतामा भाइको काममा सघाइरहेका छन् ।
डा. ईश्वर जीवनमा पैसाका पछाडि कहिल्यै लागेनन् । अहोरात्र खटेर र कमाउनैपर्छ भनेर निजी प्राक्टिसमा कहिल्यै लागेनन् । उनी तोकिएको कार्यालय समयअगावै अस्पताल पुगिसक्छन् र अस्पतालमा काम हुँदासम्म निस्किन्नन् । अस्पतालमा भेट्न नभ्याउने र उनी भनेर खोज्दै आउने बिरामीलाई उनी घरमै पनि समय दिन्छन् ।
५ दशक पार गरिसकेको जिन्दगीलाई फर्केर समीक्षा गर्दा यात्रा र उपलब्धिमाथि गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ भेट्दैनन् उनी । यति सरल रेखामा कमैको मात्र जीवन अगाडि बढ्छ । सम्पत्ति र सुविधा मात्रै खोजेको भए उनलाई अमेरिकातिरै बस्ने अफर आएकै थियो । त्यतिवेला अमेरिकामै बस भन्ने प्राध्यापकलाई दिएको जवाफ अहिले पनि उनी झल्झली सम्झन्छन्, ‘म ठूलो पोखरी (अमेरिका)को सानो माछा भएर भन्दा सानो पोखरी (नेपाल)को ठूलो माछा भएर बस्छु ।’ अमेरिकामा बसेका भए उनी हजारौँ प्लास्टिक सर्जनका बीच हराएका हुन्थे होलान् । नेपालमा उनको उपस्थितिले धेरै फरक पारेको छ, गहन अर्थ राखेको छ ।
Tags: डा.ईश्वर लोहनी, हेल्थ लिडर